GRUB Loading Error 15 — MYSTERY ZILLION
September 2009 edited November 2009 in Open Source
ကျနော့် ubuntu ကြီးမှာဗျာ Grub Loading 15 error ဆိုပြီးလာပြတယ်
ဘယ်လိုမှ ၀င်းဒိုးမတက်တော့ဘူး လုပ်ကြပါဦးဗျာ....:2:
Grub ကို ဘာတွေများပြင်သေးလည်းဗျာ ။
Grub install ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။ ကျနော် နှစ်နည်းပြောမယ် ။
1 . Linux CD နဲ့ Rescue mode ထဲကို boot တက်ပါ။ Local drives တွေကို /mnt/sysimage ဆိုပြီး mount လုပ်သွားလိမ့်မယ်။ ( Note: read-only mount မလုပ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်)
2. Chroot လုပ်ပါ။ ( လိုရမယ်ရပါ)
# chroot /mnt/sysimage < press enter >
3. Grub prompt ထဲကိုဝင်
# grub < press enter >
4 . Grub repair လုပ်ပါမယ်။ /boot filesystem ရှိတဲ့ partition ကိုသိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မသိရင် fdisk -l နဲ့အရင်ကြည့်လိုက်ပါအုန်း ။ ( /dev/sda1 ကို /boot filesystem ရှိတယ်လို့ ယူဆပြီးပြောမယ်ဗျာ ။ မဟုတ်ရင် လိုအပ်သလို change လိုက်ပါ။ ) ပြီးရင် reboot လုပ်။
grub > root (sd0,0) < enter >
grub > setup (sd0) < enter >
grub > exit < enter >
နောက်တစ်နည်းကတော့ Rescue mode ထဲကနေ chroot လုပ်တယ့် အထိ အပေါ်ကနဲ့ အတူတူပဲ။ ပြီးရင်
# exit ( or reboot )
အနည်းဆုံးတော့ grub repair လုပ်လိုက်တာပါပဲ။ Good luck !
ကျွန်တော်က Vista ရယ် Ubuntu ရယ်တင်ထားတာ default ရွေးတာကို vista ပဲဖြစ်ချင်တယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိဘူး ဖြေပေးကြပါခင်ဗျ
Ubuntu ဆိုရင် menu.lst ပေါ့။
/boot/grub/menu.lst ဖိုင်မှာ တစ်နေရာပြင်ရမယ် စူဠလိပ်ရေ ။ အဆင်ပြေအောင် /home ထဲမှာ backup လေးအရင်လုပ်ထားလိုက် ။ ပြီးရင် /boot/grub/menu.lst ကို ကြိုက်တဲ့ text editor ထဲမှာဖွင့်။ ဒီ နှစ်လိုင်းကိုရှာ
ဆိုတဲ့နေရာကိုရှာ (0&5နေရာမှာ တစ်ခြား number လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ ) Example အနေနဲ့ comment out ထားတဲ့ line တွေလည်းရှိရင်ရှိမယ်။ Comment out မထားတဲ့ line ကတော့ တစ်နေရာပဲရှိမှာပါ။ အဲဒီ comment out မထားတဲ့ default value မှာ0ဖြစ်နေလိမ့်မယ် 1 ပြောင်းလိုက်။ ( 1 ဆိုရင်0သာပြောင်းလိုက်။ OS က နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုရင်0နဲ့ 1 နှစ်ခုထဲက တစ်ခုပဲ။ )
timeout ကို comment out လိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် timeout =0လို့ပေးလိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းလိုက်ရင်တော့ Autoboot မတက်တော့ပါဘူး။ Grub က user က select လုပ်ပြီး enter ခေါက်တာထိုင်ဆောင့်နေလိမ့်မယ်။
အဆင်မပြေခဲ့ရင်လည်းပြောပါ။ ပြေရင်လည်းပြောအုန်းဗျာ :67::67:
ko Div ရေ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ.....
တလက်ဆတည်း သိချင်တာလေးတွေသိချင်လို့ထပ်မေးတာပါ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီလိုပါ ကျနော်တို့တွေ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရင် မြန်နှုန်းက 8kps ,10kps ဘဲ ပြတယ် ဘေးကသူငယ်ချင်းကကြတော့ 16,18 kps လောက်ရတယ် (IDM,Downlaod Accelator များ မသုံးထားပါ)အဲဒီတော့ မငြိမ်ဘူးပေါ့ဗျာ...
အဲဒီလိုဘဲ linux ၂ လုံးလောက်ကိုပြိုင်တူ သုံးပြီးဆွဲရင်ေ၇ာ အဲဒီလိုဘဲလား stable ဖြစ်မဖြစ်သိချင်ပါတယ်
ပြီးတော့လေ ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ window xp နဲ့ linux ကိုပြိုင်သုံးတဲံအချိန်မှာ bandwidth ကိုဘယ်သူက ပိုပြီး တည်ငြိမ်လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ် အဲဒါလေးတွေ သိချင်လို့ ထပ်မံ မေးတာပါ...
Colinn wrote: »
Linux နဲ့Window window ကတောင်ဒေါင်းရတာပို့မြန်သလိုပဲ IDM သုံးလို ့ရတာကိုး
Linux က firefox ရဲ့addon လေးက IDM လောက်တော့မမြန်ဘူး
KDE desktop အကြောင်းလေး ထပ်ရေးပေးပါဦးမလား Slackware ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် KDE ပေါ့
အကိုရေအဆင်မပြေဘူး မပြေတာကဒီလို edit လုပ်ပြီးရင် save လုပ်လို ့မရဘူး error message ပြနေတယ်
sudo နဲ့ ပြင်ရင်ကို မရတာလား ?
GUI ပေါ်က ရချင်မှ ရလိမ့်မယ် bro။ လွယ်ကူတာကတော့ /boot/grub/menu.lst ကို စူလလိပ် ရဲ့ home dir ထဲကိုကူး edit ဖို့ permission ပေးပြီးပြင် ။ ပြင်ပြီးမှ sudo cp ဆိုပြီး sudo နဲ့ replace ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။ စူလလိပ်ရဲ့ $HOME က /home/lade ဆိုပါဆို့( Username က lade လို့ဆိုပါဆို့)။ GUI text editor ကနေတော့ ပြင်တတ်မှာပါနော်။
# sudo cp /boot/grub/menu.lst /home/lade/menu.lst.backup
#sudo chown lade /home/lade/menu.lst.backup
ပြီးရင် အဲ file ကို ပြင်ဗျာ။ ပြင်ပြီးရင် ပြန်ကူး
# sudo cp /home/lade/menu.lst.backup /boot/grub/menu.lst
Replace လုပ်လိုက် ။ ဒါဆိုရလောက်ပြီ။ သေချာအောင် ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့။ ပြင်ထားတယ့် file ဟုတ်ရဲ့လားလို့။
Command line ထဲက VIM သုံးတတ်ရင်လည်း command line ကပြင်ပေါ့ဗျာ။
# sudo vim /boot/grub/menu.lst
Vim text editor ထဲရောက်သွားရင် Press 'i' ။ အဲဒါမှ insert mode ကိုရောက်ပြီး စာရေးလို့ရမယ်။
ခုနက value ပြင်ပြီးရင် Press 'Esc' ။ အောက်နားမှာ : (colon) လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဲမှာ
လို့ ရိုက်ပြီး enter ခေါက်။ ဒါဆိုရင်လည်းရပြီ။
menu.lst ကို ပြင်ဖို့ root permission လိုလို့ပါ။ မဟုတ်ရင် save လို့မရဘူး read only file ဘာညာဆိုပြီးပြောတယ်။ :67::67:
Read only file ဘာညာဆိုပြီးတော့ ထင်တrယ်နော်။ Ubuntu ဆိုတာ ကျနော်မေ့သွားတယ်
menu.lst ကို ပြင်ဖို့ root permission လိုလို့ပါ။ မဟုတ်ရင် save လို့မရဘူး read only file ဘာညာဆိုပြီးပြောတယ်။
ကျွန်တော်လည်းမကလိတာကြာပြီ အခုမှပဲ ကလိဖြစ်တော့တယ် ကို Divinity ကတော့ post တင်ထားတာတောင် တော်တော်ကြာပြီ ကျွန်တော်ကတော့ အခုမှပဲ စမ်းဖြစ်တော့တယ် ရသွားပြီအကိုရေ အစကကျွန်တော် အကိုပြောသလို 1 ပြောင်းလိုက်တယ် အဆင်မပြေဘူးခင်ဗျ ဘယ်ပြေမလဲ ကျွန်တော်က OS2ခုတင်ထားပေမယ့်boot menu မှာက ၄ ခုတောင်ပြနေတာ
Unbuntu recovery mode နဲ ့mem test ဆိုတာလေးကအပိုပါနေသေးတယ် အဲဒါနဲ ့ကျွန်တော် 1 ကိုပြောင်းလိုက်တော့ recovery mode ရောက်သွားတယ်2ကြတော့ mem test ကိုရောက်သွားတယ်3ရောက်မှအဆင်ပြေသွားတယ် ကျေးဇူးပဲ အကိုရေ :6:
Windows ကို default မပေးထားတာတောင် Ubuntu ပေါ်ကိုမရောက်တာ။
Windows က default တက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ စူဠလိပ်ဆီက linux အကြောင်းမေးသံ ပိုပြီး ကျဲပါးတော့မယ်ထင်တယ်။ :)
ဒီအတိုင်းလည်း မသုံးဖြစ်လောက်ရင် Windows ထဲမှာပဲ VirtualBox နဲ့ သုံးပါလားဗျာ။ အခုဆို dual-boot ကို ကောင်းကောင်းသိပြီ။ သုံးဖြစ်ရင် လေ့လာစရာပိုများတယ့် challenge ပိုများတယ့် Opensource environment ကို ပိုသဘောကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ :67: :67: အဲ .NET developer မဟုတ်ရင်ပေါ့ဗျာ:P
Windows က default တက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ စူဠလိပ်ဆီက linux အကြောင်းမေးသံ ပိုပြီး ကျဲပါးတော့မယ်ထင်တယ်။
ဒီအတိုင်းလည်း မသုံးဖြစ်လောက်ရင် Windows ထဲမှာပဲ VirtualBox နဲ့ သုံးပါလားဗျာ။ အခုဆို dual-boot ကို ကောင်းကောင်းသိပြီ။ သုံးဖြစ်ရင် လေ့လာစရာပိုများတယ့် challenge ပိုများတယ့် Opensource environment ကို ပိုသဘောကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အဲ .NET developer မဟုတ်ရင်ပေါ့ဗျာ
ဟုတ်တယ်အကိုရေ ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ဆိုင်ကလည်း speed ကန် ့သတ်ထားတော့ surf လုပ်ဖို ့လောက်ပဲကောင်းတယ် ကျွန်တော် ပြောလို ့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး ubuntu ကိုပိုကြိုက်တယ်ဗျ သူများက မသုံးတက်တော့ လာကလိမှာအဲလောက်မကြောက်ရဘူး အဲဒီထဲမှာကိုယ်ထားချင်တဲ့ file
တွေထား :D ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ပြန်သုံးမှာပါ ကျွန်တော်လည်းအပျင်းထူနေတာကြာပြီ
နောက်ထပ်ပြသဿသနာထပ်ဖြစ်လို ့ဗျို့နောက်တစ်ခုက update manager နဲ့package တွေကို update လုပ်ရင်းဖြစ်တယ်လို ့တော့ထင်တာပဲ ကျွန်တော့် boot menu မှာအရင်တုံးကမှ လေးခုပေါ်သေးတယ်
အခုပိုဆိုးသွားပြီ ခြောက်ခုတောင်ပေါ်နေပြီ :2::2: အဲဒီတော့ အရင်က4ကို6ကိုရွေ ့ရမှာပေါ့
ကျွန်တော်ကမရွေ ့ချင်ဘူး အခုပေါ်နေတာထဲကမလိုတဲ့ဟာတွေဖျက်လိုက်ချင်တယ် ဘာကိုဖျက်ရမလဲမသိဘူး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အဲဒီ boot file ထဲမှာကတော့အောက်ကအတိုင်း
# kopt=root=UUID=e96105f1-fc48-4793-9ae6-03c54bcf0ba3 ro
kernel        /boot/vmlinuz-2.6.28-16-generic root=UUID=e96105f1-fc48-4793-9ae6-03c54bcf0ba3 ro quiet splash
kernel        /boot/vmlinuz-2.6.28-16-generic root=UUID=e96105f1-fc48-4793-9ae6-03c54bcf0ba3 ro  single
kernel        /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=e96105f1-fc48-4793-9ae6-03c54bcf0ba3 ro quiet splash
kernel        /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=e96105f1-fc48-4793-9ae6-03c54bcf0ba3 ro  single
အဲဒါ ဘယ်ဟာကိုဖျက်ရမှာလဲ မသိဘူးဖြေပေးကြပါဦး :2::2:
Kernel update လုပ်လိုက်လို့ပါ။ Kernel နှစ်ခု side by side ရှိနေလို့ နှစ်ခုလုံးပြနေတာပါ။ မလိုအပ်ရင် မဖျက်ပါနဲ့ comment ပိတ်ရင် ပိတ်လိုက်ပါ။
အခုဒီ new kernel version နဲ့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် version အဟောင်းရဲ့ instant နှစ်ခုကို comment ပိတ်လိုက်ပါ။ ဒါမှ kernel အဟောင်းပြန်သုံးချင်ရင်တောင် grub instant ပြန်ရေးနေစရာမလိုပဲ comment ဖြုတ်လိုက်ရုံနဲ့ရမှာ။
9.10 မှာ menu.lst ဆိုတဲ့ file ကိုမတွေ ့တော့ဘူးခင်ဗျ မရှိတော့တာလား ကျွန်တော်စက်မှာပဲပျက်နေတာလား ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပဲမမြင်တာလားတော့မသိဘူး
ဒါပေမယ့် နောက် file တစ်ခု အသစ်တွေ ့တယ်ဗျ grub.cfg ဆိုတာ သူကိုပဲ ပြင်ရမှာ လား
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဖြေပေးကြပါဗျိို ့